Vanhu vazhinji vanofunga kushora Microsoft yeWindows 10 | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft ine dambudziko nyowani. Kukanganisa kusingaverengeki mukati Windows 10 zvaita kuti vamwe vashandisi pamwe chete vazvitaure.
Zvinotaridza kuti Microsoft iri kuwedzera matambudziko nehurongwa hwayo hwekushandisa. Vamwe vashandisi vari kunyunyuta nezve kusashanda zvakanaka kweWindows 10, ndosaka vachifunga kuita a kunyunyuta pamwe chete kurwisana neMicrosoft. Pfungwa yedare yakatangwa mudare reWindows, kana iwe uchiziva Chirungu unogona kuona shinda pano.
Windows 10 yakavimbisa zvakawanda, zvakadaro tingaone sei pano haina kunyanya kushata kana tikachienzanisa neBuntu. Chimwe chikonzero ndechekuti kune vanhu vakatama kubva kune mamwe masisitimu (kunyanya Windows 7), matambudziko mazhinji ari kuitika iyo Microsoft inoedza kugadzirisa nepese painogona nepatches, asi kuti havagone.
Zvikonzero zvemhosva inogona kupokana neMicrosoft
Kushaya kuvanzika: Iwe zvechokwadi unorangarira pandakakuudza izvozvo GNU yakaronga Microsoft seMalware. Inozivikanwa kune vese izvo Windows 10 iri kupfuura nemukati mekunze kweyakavanzika yevashandisi (iyo yemahara ine mutengo), kuve zvakapesana neLinux, kureva spy chirongwa chekushandisa. Izvi, kunyange vamwe venyu makafanana, vazhinji vari kunetsekana nenyaya iyi.
Kuita zvisirizvo uye zvikanganiso: Kunyanya kune vanhu vakatama kubva paWindows 7, Windows 10 yakakonzera kudonha mukuita nemhosho dzakawanda, uchiona chete izvo zvinotanga nekukurumidza.
Anotsvaga mbatatisi: Ichokwadi, iyo yemukati Windows 7 yekutsvaga injini yaive yakanaka. MuWindows 10 inotambura kudzikira uye kazhinji inongoreva chete kune zvawanikwa zveBing.
Cortana uye Explorer havashande: Nguva nenguva, komputa inotonhora, paunotangazve, meseji iyi inoonekwa uye unofanira kuitangazve zvishoma.
Iwe hauzive kuti ndeipi system iri pa: Pane dzimwe nguva, kana uchitendeuka PC, iyo Windows inotangisa kurira kurira 7 uye anofunga kwechinguva, achitora nguva yakareba kupfuura inodiwa kutanga.
Zvinhu zvakakosha mira kushanda: Zvinhu zvakaita seWi-Fi, chitoro cheapp, Cortana… Vanomira kushanda pavanonzwa kuda.
Zvikumbiro mira kushanda mukati Windows 10: Ndinoyeuka apo baba vangu pavakamira kushanda Norton Antivirus pakuvandudza. Mafomu mazhinji nemitambo zvinomira kushanda mushe kana uchinge watamira kune ino system.
Hazvina kunyanya kuipa: Sezvandambotaura kare, iyo yekushandisa sisitimu haina kunyatso kuita seyakakura danho sekuparidza kweMicrosoft. Kana isu tichiita chaiyo yekuenzanisa kuenzanisa neLinux masisitimu, hurongwa hunoratidzwa. Kana tikazvifananidza neWindows 8.1 kana neWindows 7, mashandiro acho akafanana kana kuti akawandisa muzviitiko zvakawanda .Kubvumirana kwekubatana kunouyawo mupfungwa, umo vakavimbisa nharembozha yakafanana neiyo pc, iyo havana kuzadzisa zvichiri
Izvo zvakafanana zvakafanana: Kunyangwe mune dzidziso ivo vakachinja iyo Kernel, zvakangofanana asi zita rakashandurwa. Kushanda neWindows Kernel hakuna poindi yekuenzanisa neiyo ye Linux, iyo iri mukuenderera mberi nekuvandudza kunyangwe uine shoma bhajeti. MuWindows vanongodzokorodza iyo kubva gore rapfuura uye nekushandura zita, asi zvinogara zvakafanana.
Mukupedzisa, Microsoft inofanirwa kutevedzera zvishoma iro basa rinoitwa nevanhu veLinux, avo vanopedza siku nesikati vachishanda pamaitiro avo ekushanda kunyangwe vari varombo. Nyaya yeUbuntu inouya mundangariro, iyo inoburitsa vhezheni mushure memazuva matatu ivo vatotanga kushanda pane inotevera. MuWindows, ivo vakaganhurirwa pakutora 2-kick system, kuti chinhu choga chinoshanduka izita uye kuti rine zvakawanda zvembugs.
Kana chiri chekunyunyuta pamwe chete, kana zvikaitwa, handifunge kuti chero chinhu chingashanduke (Microsoft inyika yepasi rose ine mari yekusiya). Zvisinei kana izvozvo ivo vanofanirwa kuteerera kune vashandisi sezvo rimwe zuva vacharasikirwa nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » Vanhu vazhinji vanofunga kushora Microsoft yeWindows 10
Zvinotaridza zvakanaka kwandiri kuti chero munhu anoda kumhan'ara anofanira kuzvimhan'arira, asi zvataurwa zvinoshoropodza mashandiro ewindows 10 nekuzvienzanisa nehunhu hazvina basa uye zvichiti zvinoshanda zvirinani, aiwa, ichave iyo vhezheni nekubatana, zvinoita sekunge vamwe havana kufarira izvozvo Windows 10 inoshanda chaizvo uye vanoishoropodza pasina zvimwe, uye kukuudza kuti handibvumirane nezvakataurwa muchinyorwa chino, hapana chekuita neichoicho zvazviri uye mashandiro ayo Windows 10 uye mumwe anokuudza kuti ane komputa ine makore anodarika gumi ane windows 10 anoshanda zvinoshamisa uye ubuntu mate akaiswa.
Nehurombo, mazhinji makomendi akavakirwa pane zvandakaona.
Ndine mune imwe ye Windows 10 makomputa (emitambo) mune mbiri bhutsu neUbuntu uye chokwadi ndechekuti 7 yanga iri nani. Uye usati washoropodza timu inokuudza kuti inotakura Intel i5 ine 8 GB yegondohwe.
Ini handina kana kuyedza Cortana (inokumbira nzvimbo uye ini handidi), asi chokwadi chekuti muongorori anotonhora uye kuti iyo system haitozive kwazvinoitika kwandiri kazhinji kupfuura zvandaizoda.
Pangosvika pakareji yemhepo inokwana zvakakwana, ndinoti mawindo eWindows, uye hazvisi zvekuti ndinovasemesa (ndaifarira Windows 7 kusvika pamwero wakati) asi ndinofunga kuti Windows 10 kukundikana kukuru, kunyanya nekuda kwekumhanya.
Ini ndinobvumirana newe, kunyangwe ini ndiine yakaderera-sosi PC, ndiri kuita zvakanaka nemahurongwa mashoma akaiswa ayo anodikanwa kuti ashande pane yekugadzira imba PC.
Hunhu hwe laptop yangu PC:
Hardware: Brand: Dell INSPIRON 6400, 1.60 GHz mbiri-musimboti processor, RAM: 1 GB, 75 GB hard drive.
-Office 2007 kusangana,
-360 chengetedzo yakazara,
-Vatyairi vezvimwe zvishandiso zvakaita se: Blackberry, Android, pakati pevamwe.
-Uye mamwe mapurogiramu - nekutadza kunounza iyo OS Windows 10 Pro 32 bit yekupedzisira kuunganidzwa 10586.17.
Kwandiri OS yakanakisa ini handinyunyuti zvachose kubva paWindows 98 kusvika Windows 10.
Ngirozi huru akadaro
Izvo hazvisi zvekuda zvakanaka kana zvakaipa asi kana iwe ukaona kuti yangu pc iri sei, kusvikira iwe wagona kugunun'una kuti i5 ine 4 vhidhiyo kadhi uye 16 ram
1 Ini ndinokundikana mutyairi 2 Ini handikwanise kudzokera kune yangu yekare vhezheni yemhepo windos 8.1 nekuti ini ndinowana kukanganisa 3 ndinofanira kusevha yangu yese yegore-zororo kuti ndinotora $ 1 kuti ndiende kune tekinoroji uye ndidzoreredze yangu yekushandisa system kubva pc yangu asi kune iyo Iwe unoona mumwe achitya kuti vanozo chinja zvidimbu kana kwete zvezvakange zviri zvekutanga zvidimbu ini ndinozozvichinjira kumatanho
Ikozvino ndirikushaya mutyairi, yangu skrini idiki, iri makumi mana uye makumi matanhatu masendimita kubva pandakagadziridza kuenda kumhepo 40
Izvo zvinongonditendera kuisa screen ye800 ne600 saka hazvigone kuitwa nekuti pane zvichemo izvozvi hapana kana mumwe wemitambo yangu andipe kana gta 5 haindipe wowcrafts legion kana zvese zvinorema mitambo hazvindipe iyo skrini idiki
Ndiani achatamba uye aine mini screen isingapi izvozvi pandinopinda mutambo dema skrini yezviripo
Dai ndanga ndaisa yambiro ndichiti unofanira kutora madhiraivha usati wagadzirisa pc yako kuenda kuwindows 10 ingadai isina kuvandudzwa nekuti ini handina madhiraivho pc yangu asi kana iwe uchida kundipfuura hapana dambudziko saka vanobhadharisa ini zvishoma kana ndikatora technician Kwandiri hapana dambudziko sekutaura kwako kuti zvinoshanda 100% kwauri saka tichabatsirana nekuti sezvo musina matambudziko saka munogona kubatsira 1 asina mari asi ini ndinobatana neinternet nenhare mbozha yangu kuburikidza necompc yangu handina ma megabyte akawandisa eayo Kana ikandibatsira kudzosera winfdos 8.1 yangu kana ndikawana iyo put0 kukanganisa yandinogara ndichiwana kana ndichiedza kudzokera kumhepo windos 8.1 ndingafarire shamwari nekuti mavhiri angu 8.1 vatyairi vakwana, hapana chimwe chandiri kupotsa nekuda kwekukanganisa chete hakundibvumidze kudzokera kumhepo yangu 8.1
Pindura kuna Arcangel
Ini ndaiyiyedza ... asi zvinosuwisa ndainzwa urombo, dzimwe nguva yaidya 100% ye RAM yangu (ndine 8GB), zvakare kubva pakuona kwangu maitiro enzira dzezvimwe zvirongwa zvinoramba zvichimhanya kumashure, kunyangwe mushure mekuisunungura . Ndinoyeuka pandakanga ndichipa bvunzo yehurongwa (Java) ndaive nemafungiro mu win10, izvozvi panguva yandaishandisa yaive izere uye pakarepo yambiro dzakatanga kuoneka uye ini ndanga ndisingade kutangazve kuchengetedza nguva. Musi iwoyo iwo Ide yakavharwa kana iine kodhi yakapotsa yapera uye isina kuumbiridza.
Zvakanaka ikozvino ini ndinoshandisa Manjaro (pano ndine dema dema yakaiswa) uye dzimwe nguva Windows 8.1 yeMitambo (FIFA15, BATLEFIELD 4, Zera REMAMBO).
Ndichinyatso tarisa kumashoko ini ndinoona kuti Windows ine musika mugove nekuda kwezvikonzero zvitatu.
1.Mitambo: vazhinji vedu (ini pachangu ndakabatanidzwa), isu tinongova neWindows yekutamba, sezvo Linux ichine basa mune icho chinhu.
2. Kusaziva: Vanhu havana kujairana neLinux, saka vanotya pavanoona imwe. Pasina kutaura kushaikwa kwezivo mune chimwe chinhu chakakosha muLinux, iri mirairo.
3. Tsigiro kubva kune vagadziri: Vanhu vanotenda kuti Windows mahara, sezvo ichiuya yakagara yakatakurwa pamakomputa, asi havazive kuti zvinokanganisa mutengo wekupedzisira.
Ndiri kushamisika kuti chii chingaitika kana mushandisi, pachinzvimbo chekumupa pc ye400 euros, akaudzwa ... Unogona kusarudza pakati pekubhadhara maeuro mazana matatu nekuisa Ubuntu mukati kana kubhadhara mazana mana nekuisa Windows mukati, nekuti zvirizvo chete ivo vakabvisa iyo Ubuntu sarudzo ...
Ndakatenga muchina ne w10 ... tarakita inodhura zvakanyanya! Pandakangosvika kumba, perticione uye kuisa debian ... uye ipapo paive ... zvakaipa kwazvo chokwadi ... okay handina kutenga muchina muhombe ndinozviziva asi unotanga ne 1,5 - 1.8G yegondohwe rinenge ... zvakaipa zvakaipa ...
Hapana chekumhan'ara, ndiani anovatuma kuti vasaverenge chibvumirano chebasa.
Kana iwe usingaifarire, usachiishandisa, zviri nyore kudaro, ndiani wegehena uyo vashandi vanofunga kuti ndeyekuzivisa? Microsoft ikambani uye nekudaro inogona kuita chero zvazvinotora uye isingagutse yakaderera mushandisi quota ye linux e 4 katsi izvo zvinoenderana nazvo (pamwe nemamwe makambani makuru)
Kana iwe uchida kunyunyuta nzira yakanakisa KUTI USASHANDISA. Zvakareruka sekunge linux ine hanya nezve zvakavanzika, iwe unongofanirwa kuona izvo zvirongwa zvekudyara zvakaiswa uye izvo zvisingatenderi iwe kuti ubvise sezvo zvaizokanganisa zvimwe zvinhu. Win 10 ine zvayakanakira nezvayakaipira, zviri nyore
Ndinoda vhidhiyo yemusikana wako https://www.youtube.com/watch?v=viQOBLF3AcY , vakaigadzirisa mumahwindo
tsika huru yako
Shamwari yakandiudza kuti ndeye gnu-Linux, ubuntu, handisati ndamboifarira, ndinosarudza inofanirwa kana fedora ,, muzukuru wangu anotamba, anofara neWindows 10 mitambo yese inomhanya kusiyana ne8, iyo yakandikumbira kuti ndiibvise vhiki , kunyangwe hazvo ini ndakaitenga payakangobuda. Ini ndinofunga gnu-linux haisi kushamisika, inoshandisa sosi imwechete papuratifomu yemifananidzo (yakanaka),
E. Galarga akadaro
unogona kuona malaleche mutsamba…. kuuya kubva kune linux saiti …… chii chaunogona kutarisira….
asi ivo vanofanirwa kunetseka nezvekugadzira distro inoshanda chaizvo, inokwezva uye yazvino ... yezviuru (ndinowedzeredza) ye distros zvinoita sekunge hapana kana imwe yakanaka uye yakajeka ... ..
Ini ndinoshandisa windows7 / 8.1 / 10 uye ndiri kunyatsofara navo pamakomputa angu….
Ini ndinoshandisawo Ubuntu… uye ndisingade kuita gakava…. Ndine matambudziko mazhinji nechikwata chebuntu…. processor yavira, gondohwe ndangariro haritombo taura… uye haina kukodzera zvese izvo nekuita, haina kana kutopfuura windows.
asi yega yega inotaura nezvekuti zviri kufamba sei pamutambo….
iro timu timu iri yepakati I5 3Generation, 8 GB gondohwe….
Ini ndoda zvimwe mashandiro ayo kubva windows ... Uye ini ndinojekesa kuti hazvireve kuti windows iri nani pane ubuntu kana zvinopesana… ..
mapoinzi ekuona hapana chimwe….
Pindura kuna E. Galarga
Dionicio Chiedza Speed akadaro
Kwandiri, Windows 10, sezvo Ubuntu kana Linux zvisina kufanana, Windows 10 ine zvikanganiso zvinokonzerwa nevagadziri vamwe uye dzimwe nguva zvinogona kupa zvikanganiso asi hazvireve kuti munhu haaende kunomhan'arira Microsoft nezvechinhu chakadai uye dzimwe nguva icho Windows 10 haishande zvinoshanda nemazvo asi pane zvimwe zvikanganiso zvinogona kugadziriswa Linux kana Ubuntu havana chero zvikanganiso saka hazvivaite kuti vasiyane neWindows 10 dambudziko rinofanirwa kunge riri nekuda kwerimwe rudzi rwechirongwa chatinoisa pane edu Makomputa. ine Ubuntu Linux kana Windows 10 sezvo Vangangogona kutipa zvikanganiso zvakawanda ini handisi fan wechero ipi ye2 asi ini ndinongoda kujekesa chinhu Windows 10 Ubuntu kana Linux Windows 10 ine inopfuura kamwe chete kukanganisa kwakajeka haisi iyo yakanyanya kushanda system yatakaedza Redmond yakapa kuyedza kwavo kuita Windows 10 chimwe chinhu chiri nani nekuda kweMabhirioni evashandisi akataura uye vakashora kuti Windows 8 yaive njodzi uye hachisi chokwadi asi ini ndine 25 PC ine Windows 10 ine yakakwanaZvakafanana mashandiro neUbuntu neLinux, munhu wese anogona kufunga nezve Windows 10 Ubuntu kana Linux zvakafanana hazvisi zvese zvakakwana azpe kudzikama kwete ese mashandiro masisitimu akakwana Ubuntu kana Linux havasati vapa zvikanganiso izvozvi ... :)
Pindura Dionicio Chiedza Speed
Isa semicolon, nekuti ini ndinowana dzungu ndichikuverenga.
Kurondedzera zvakajeka kunoratidzika kwandiri kuva kwakanyanyisa, asi ichokwadi kuti vaizofanira kuteerera kuvashandisi kugadzirisa izvo zvikanganiso.
Kana chiri chokwadi kuti kana iwe ukaita yakachena kuisa kana kutama kubva pa w8.1 haina kupa zvakakanganisa zvakawanda senge pakutama kubva ku7, asi chokwadika, ichiri kupa zvikanganiso zvakakwana kunyangwe zvese.
Vazhinji vedu takasarudza w7 nekuti sekutaura kwako, 8 idambudziko uye 7 ndiyo inonyanya kushanda sisitimu yakaitwa naMicrosoft. Chinhu ndechekuti neiyo yemahara yekuvandudza, vazhinji vedu takaenda ku10 nekuti kuyedza zvishoma uye kunze kwekuda kuziva uyezve, zvinoita sekunge havana kuyedza kune vashandisi vakabva w7.
Uye hatitombotaure nezvenyaya yekuvanzika, ndine zvakawanda zvezvinhu zvakaremara asi sedziviriro ndinoedza kushandisa Windows kutamba uye zvimwe zvishoma.
LAURA LORENA GOMEZ OCAMPO akadaro
Hapana anoshanda system akakwana. Hapana ane bug-isina, sekusina imwe iri 100% yakachengeteka uye yakavimbika. Musiyano uripo pakuti kambani yekugadzira iri mukubvisa zvigamba uye kugadzirisa matambudziko nemakomba ekuchengetedza avanowana. Kubatsira kweLinux ndeyekuti kururamisa kwekukanganisa uye kusagadzikana hakutore nguva.
Pindura kuna LAURA LORENA GÓMEZ OCAMPO
Ini ndinozvisimbisa, handibate Windows kunyange zviri kure, asi mwanakomana wangu ane makore 17 okuberekwa ane chizvarwa chekupedzisira I7 laptop uye inoshamisa NVIDIA mifananidzo yadzoka kuWindows 7 nekuti mitambo iri Windows 10 maererano naye yakanyanya kuipa, uye Ndinokuvimbisa kuti Iye anogara achidya mutambo.
Miguel Litran akadaro
Ndiri 100% muchibvumirano nepositi, windows 7 ndiyo yakanyanya kunaka yavakaita, windows isina basa nguva dzese dzinoita maOperating Systems awedzere "mapenzi" izvo zvaisazoratidzika kunge zvakaipa kwandiri kana vakaramba vachirega mushandisi achisarudza zvavano want, zvinova ndizvo zvinofanirwa kuitwa neOS, nekuti iwo maWindows anotendera kuti uite zvishoma nezvakawanda uye uite izvo zvinoda OS. Semuenzaniso: haugone kusarudza kuti ungaisa sei izvo zvekuvandudzwa, inoisa ese zvese otomatiki, kana iwe usiri kuda kuisa chero kana iwe usiri kuda kuzviisa panguva iyoyo, wakamisikidzwa nekuti iyo OS inoita zvainoda kwete zvinoda mushandisi. Zvakanaka, nezvose, zvishoma uye zvishoma kuita (unogona chete kungochinja mavara emabhokisi eapp uye bhawa nekuoma kukuru, nepo mu windows xp iwe waigona kushandura mavara ezvese zvese zvinosanganisira zvinyorwa zvemawindows nezvimwe ... zvinotyisa kuti Microsoft inoita zvainoda uye haiteerere mushandisi, kana zvirinani haishande zvine musoro nekuti zvinhu zvakawanda zvinoita kuti zvinyanye kukura pane kugadzirisa uye zvinoita sekunge kumberi zvinodzokera kumashure ... iyo nyaya kubva mukutsvaga sekutaura kunoita posvo, marara .. uku uri muchirikadzi 7 waive mukaka .. zvakadaro .. iyo windows 10 marara uye pamusoro pezvose vanotimanikidza kuiisa nekuti mapurosesa matsva anongoshanda kana iwe uine windows 10: S zvakanyanya inotsamwa uye panguva imwechete mushandisi weMicrosoft nekuti ndizvo zvinoshandiswa zvakanyanya muhupenyu hwese uye ivo vanotora mukana weizvozvo ... kana zvisiri ini ndakachinjira kune linux kana mac, asi isu tinofanirwa kuidya nembatatisi kana kumboti mushumo uye kunyunyuta kuti uone kana kuri kushandisa ...
Pindura Miguel Litrán
MuWindows XP shanduko idzi dzakangoshanda chete neyekare tema. Dai iwe waive uchishandisa iwo Mwedzi theme, iwe waifanira kuzvikoshesa iwe kune matatu mavara: bhuruu, maorivhi uye sirivheri.
Tomas Andres Gajardo Gutierrez akadaro
Iwe wakakanganwa kutaura kuti Windows ichine chimwe chakakomba chakakomba: kudzoreredza kumashure uye mupiro wayo mukuru kuchirongwa chakapera ... hazvigone kuti S: O chikumbiro chinodikanwa pasina kuva nesarudzo dzakawanda kudarika imwechete desktop desktop ... vazhinji vakafunga kuti hurongwa hwaizomhanya zvakanaka mumakomputa avo makumi matatu nemaviri ... asi chokwadi chakasiyana zvakanyanya sezvo uchivaturika sezvo pasina dhata remhando yedesktop, vanoita kuti zvive zvisingaite kushanda nayo, kusiyana ne32 iyo kana iine retro inoenderana vhezheni (Mutete pc ) uye kuti zvakare yakagadzikana mune makumi matatu nemaviri.
Pindura kuna Tomas Andres Gajardo Gutierrez
Ehezve, izvi zvakaitika kubvira kare kare, apo ini ndaifanira kumhanya mitambo yekare mune chaiwo michina nekuti zvaive zvisingaite kumhanyisa iwo mushanduro dzazvino dzeWindows.
Isu tese tinoziva nezvechinyakare chakarongwa, sezvo Windows ishamwari huru yevose vanogadzira makomputa, uye vanobvuma kuti makore ese matatu kana mana iwe unofanirwa kutenga laptop nyowani pane ese gumi makore.
Kunyangwe kune rimwe divi, ini ndichiona komputa yakati simirei, ndichiona makomputa akadhura achiri kukoshesa zvakanyanya kana kushoma zvakafanana nemakore 3,4 apfuura. Vanhu vanokanda PC yavo ne2 GB ye2 GHz Core2,5Duo RAM kuti vatenge 2,2 GHz Celeron ine 4 GB yegondohwe uye musimboti, vachifunga kuti vatenga chimwe chinhu chiri nani asi zvinosvika pakuipa, kubvira makumi maviri nemashanu euros. wedzera gondohwe.
Ini ndakaisa Win 10 pane yekare noteb mbiri mbiri 2g 4 g gondohwe, inoshanda mmmm, zvine mutsindo, asi zvishoma zvidiki zvinhu zvakaitika, bha rekushandisa rakanyangarika zvisinganzwisisike ndokudzokera kuWin 7 menyu bar, kurira kwacho kwakaremara, ini chubhu iyo kudzoreredza mutyairi iyeye, panguva yekuvandudza iyo OS inononoka pasi (zvisingaite), chimiro chakanaka cheWin7 pamwe nekushambadzira kwayo uye manejimendi manejimendi haina kana kutomboswedera padyo nayo (dingindira rekutanga rinotyisa, rinotyisa), harina zvakasiyana chero manzwi ekusarudza kubva seanomwe, ese IE 11 uye Edge hazvina chekuita neChtome kana Firefox, hapana mitambo, hapana zvigadzirwa, VirtualBox haichashande, mazhinji emitambo yangu yandaifarira futi, dzimwe nguva inotanga nekurira kweWin 7 , yakatsemuka nepakati, uye nyaya yekuvanzika inzvimbo yakasarudzika, kunze kweizvi zvese ngatiti zvinoshanda
Icho ndechekuti kukwidziridzwa kubva paWindows 7 zvechokwadi kune njodzi. Vanoti pamakomputa anga aine iyo w8.1 haina zvikanganiso zvakawanda, zvisinei, sezvo Windows 7 yakanyanya kukwakuka zvavasina kunetseka kuita nemazvo.
Ini handizive kuti nei vachinetsekana kuisa chimwe chinhu nezve windows pane linux peji.Kutsoropodza ndizvo zvinoitwa nevanhu ava
Pindura kuna rsdn
Report? Handizive kuti zvichave sei kune dzimwe nyika kwaunogona kumhan'ara kushambadzira kwenhema, asi kwandinogara, kana ukatenga shangu dzemitambo semuenzaniso uye zvikasazadzisa zvaunotarisira zvichienderana nezvipikirwa, hauna mikana yakawanda asi bvuma kuti iwe wakasarudza kuona kushambadza uye kwete yekukuzivisa iwe nezvekuti chigadzirwa chacho chakanaka sei.
Izvo zvinopa fungidziro, ndinogona kukanganisa, kuti vanhu vanowanzo tenga nekukurumidza kuti vave ne "yazvino", apo muchokwadi zvinogara zvichikurudzirwa kumirira mwedzi mina kuti vaone zvinotaurwa ne "testers" nekukurumidza, izvo zvinoshanda kune chero chinhu, kunyangwe kune GNU / Linux distros, kana ivo vachandiudza kuti ubuntu, fedora, nezvimwe hazvina kumbotadza kubva kufekitori.
Haufanire kushivirira, unofanirwa kuzvizivisa zvishoma uye usacheme kuti vakanditengesera chimwe chinhu chisina kuvimbiswa.
250 vanhu pasirese havasi vazhinji zvakare. Uye sekureva kweiyo wiskipedia, iyo NT kernel yatove pane vhezheni 10 (Chikunguru 2015) uye muna 2012 WinRT yakawedzerwa kune maARM processor, parizvino akashandurwa kuita Win 10 Mobile ARM. Nezve iyo mbiri bhutsu, Windows 10 ipa zvakare tsamba C kune yayo bhuti partition yekushandisa kuenderana, saka kana iwe ukatanga naWin 7 inoisa iyo C kune iyo Win 7 chikamu, izvo zvinoreva kuti chirongwa chinoshandurwa nguva yega yega mbiri bhutsu (mameseji ku mifananidzo). Cortana, kuti ishande, unofanirwa kuigadzirisa kune mutauro nedunhu raunoda. Huya, Win10 ine matambudziko asi kwete sekuwedzeredza sezvaunotaura.
louis camargo akadaro
Ini ndinoda Linux, kubvira Fedora Core 2.0.
Ini ndaka redhat Certified uye LPI III
Ndiri MCSE kubvira Windows 2000, uye ndinogona kutaura kuti munhu akanyora chinyorwa ichi haazive zvaari kutaura nezvazvo.
Nenzira, Microsoft nhasi yatyora nhoroondo yayo mumusika capitalization.
Chibereko chebasa rake rine njodzi ndinofungidzira.
Kid usati wanyora zvirevo zvakadaro unofanirwa kuve nematanho akawanda kupfuura PC yemitambo.
Nenzira, nei Ubuntu?
Pindura Luis Camargo
Mhoro zvakanaka. Ini ndinoda mazita ako muRedhat neMicrosoft, rega ndizvizivise. Ini ndiri Mainjiniya eSystems mune yakakura kwazvo nyika dzepasi rose muSimbi. Makore makumi maviri ezviitiko uye nyanzvi yekuziva pane Windows, Unix uye Linux masisitimu, ndosaka vachindibhadhara. Ini ndichakuudza kuti kambani kwandinoshanda kutenderera pasirese ine anopfuura mazana maviri emakumi makomputa ane Windows XP, ehe zvuru zvemaseva, tenda Mwari, mashoma neWindows uye mazhinji aine UNIX neLinux, asi izvi handizvo. Nyaya iripo ndeyekuti mwedzi mishoma yapfuura takatanga nekutama kwemakomputa pamwe nehurongwa hwekushandisa, mune iyi kesi Windows 20, mhedzisiro, shit. Matambudziko ese akadzoka kumashure uye aine Windows 200.000 ayo anotoita zvirinani uye anovimbika. Uye iyo Microsoft inoita mari yakawanda, uye kana yarega kuzviita, hahahaha, iwe unowana komisheni, handifunge kwete, zvakadaro zvakajairika kana mamirioni emarezinesi akafukidzwa nechisungo chekuabhadhara paunotenga pc nyowani, anosungirwa kuva nehurongwa hwekushandisa hwaungave usiri kufarira. Ini handizive nzira iyo uyo akanyora chinyorwa chichava nayo, asi ndinokuvimbisa kuti ndinazvo.
Ini ndinobvuma kuti iyo system haisi chishamiso uye chokwadi ndechekuti ruzhinji rwematambudziko aya runogadziriswa nekumisikidzwa kwakachena, iyo yakaronga kukwidziridzwa kubva pa7 kusvika pa8 / 8.1 uye gare gare gumi haina kuzomboita sezvayakatarisirwa.
Kana paine chimwe chinhu chandinofanira kuratidza sekutadza kweiyo sisitimu iko kushoma kwepachivande uye kutadza kwakanangana nehardware, kubva pane imwe nguva kuenda kune imwe kurira kwaizorasika kana muzviitiko zvakaipisisa neyakagadziriswa nyowani iyo PC yaizomira ine bhuruu skrini. .
Windows 10 chete matambudziko ane dzinenge zvese, (software uye Hardware). Ndine kubva paWindows 3.1 zvichienda mberi, uye inenge yakaita seWindows Millenium.
Nditarise, zviri nani kwandiri naGnu / Linux, kubatana hakuna, izvo zvinorema kwazvo, asi fedora kana Open Suse zviri nani kwandiri pane Windows 7 kana 10. Ini ndinofunga kuti Microsoft inogona kugadzirisa nekunatsiridza Windows 10 Unongofanira kumupa mukana. Chinhu chega chinomisa Linux ndicho chinhu cheimba. kune munda uyo wausingakwanise kukumbirwa.
Ini ndangotendeuka kubva kuWindows 10 kuenda kuWindows 7 uye Gnu / Linux. Mahwindo anopunzika munzira dzisinganzwisisike uye anogona kukutsamwisa dzimwe nguva. Zvino, sekutaura kwemakabati ekukurumidzira. Shandisa chete muzviitiko zveE.
Pindura kune pygant
Pilar Diaz akadaro
KUKUMBIRA VAYA VARI KUUYA BHUKU RANGU ROKUDZIDZISA WAUNOGONA KUKUMBIRA RUBATSIRO HERE, HAPANA WAKANDIBATSIRA ´´ NDINOFANIRA KUTI NDIVO, NEKUTI ZVINONYADZISIRA PASINA RUDO NEMATAMBUDZIKO EGrafiki, PC ITSVA HAISINA SIMBA, ASI NDINOTENGA IYE NDINOBHADHIRA, HAPANA MICROSOFT, KUSA KUTI AMD KANA HP ICHIDZIDZIRA BHUKU, VAYA VANE ZVAKAITIKA ZVAKAWANDA VAYA VAYA VANE Kadhi REMAOKO, AMD, NDINOMIRIRA PASINA RUDO, SEZVAKAITA Mazana VANHU Uye HATIFUNGE VANHU VANE Urema IZVO ZVINONYANYA ZVINONYANYA KUKOSHA HAVAKWANISE KUSHANDISA MAOKO AWO, iyo AMD, BASA RAKAIPA RAVANERI KURANGWA NEZVINORWADZA, ZVINOBATSIRA CHINHU KUNYAYA, VAYA VAKABVA HP ZVAKAFANANA KANA MUMWE MUNHU AKUBATSIRA NAYE MIMWE MATAMBUDZIKO ARI PANO, AKANENESESWA VAKAMIRIRA CHISHamiso, NEVAKOMESI VAKAITA MAWINDOWI 10, NDINOFUNGA KUTI VAKAPENYA UROPA.
Pindura Pilar Diaz
windows 10 ndiyo hombe yekushandisa marara munhoroondo, komputa yangu nyowani, ine mazuva mana ekuberekwa, pane maforodha ayo aisingatenderi kuti ndipinde, ndeyangu komputa, ndakaibhadhara, Microsoft haina kuipa ini, haina kundipa kurodha pasi, ndine cortana yakaremara uye ndinoona kuti iri kumhanya kumashure, zvinondipa matambudziko neantivirus, zvinotora nguva kutanga nhamba isingaverengeke yematanho ayo anotanga kuba kusvika dhata rekupedzisira randinogona kuteedzera, ipapo tichaona tsvina yaBill Gates achiita basa rerudo, vakachinja BIOS, izvozvi inonzi UEFI, DZOKA KUWINDOWS 4 Kana ubuntu chiitiko, havafanirwe kungovaudza chete asi kutora Bill Gates, kumuisa mutirongo uye kurasa kiyi, vanofunga kuti komputa ndeyako, uye ini ndakaibhadhara. SHIT SOFT VANOFANIRA KUDANIRA IYI PANDA YEMAH.P, TA
Ana Maria akadaro
Zvakanaka, ndakanyangadzwa neiyi vhezheni 10. Ini ndaive ne7 kusvika ikozvino uye ndanga ndisina chichemo, vanodzika gumi (handirangariri ndichiitora ndega), Ndinoona kuti YAKAFANANA NEASS, inoderera komputa yangu, inoisa zvigadziriso, ichiremadza zvese zvandiri kuita, pandinonzwa senge, zvinoita kuti ndiende zvishoma zvishoma. Ndine gumi kwemavhiki akati wandei uye mushure menguva iyoyo ndafunga kudzokera kushanduro 10. Ndinodzokera ku10 uye… .flex, NDINOZVIMISIRA 7 NEKUTI ZVINOBUDA MUC !!! pandakangomuudza kuti ini handifarire uye kuti ndinoda iyo 7 !!! Huya, vazhinji venyu muve vakuru, asi ruzivo rwangu rwune njodzi, uye ini ndine 10-gore-rehunyanzvi i7, huh? saka nei michina isina kukwana haina kukwana.
Hongu, ndaizovapomera. Kana zvirinani ndaizodaira kuti vandisiye ndiri ndoga, kana ndichida kuchengeta 7, kuti vatore komputa yangu uye nesarudzo dzangu nekuita zvinhu zvandisingade uye ndaratidza kuti handidi
Pindura Ana Mª
Totally vanobvumirana, ini ndiri mumamiriro akafanana. Hasha dzakakura, handikwanise kushandisa komputa kushanda nekuti inoshanda zvinotyisa uye nyowani nyowani! YOKUNYADZISIRA
Ndingafarirewo kuvaudza sezvo system yacho yakaiswa otomatiki pasina mvumo yangu, uye ikozvino komputa yangu inouraya, inononoka, kupunzika .. hazvigone kushandisa komputa, zvinoshuva ndinonzwa kupoperwa neshanduko iyi pakombuta Izvo zvaive zvakanaka ... i7 uye inoshanda zvakaipa, izvi zvinonyadzisa !!!! Ndatenga Mac uye handifunge kuti ndichazombotengazve Windows futi !!!!! Pane kuenda kumberi vanodzokera kumashure !!
Nyaya iri pachena kuti windows 10 haina kugadzikana. Unoenda kukambani chero ipi inounganidza makomputa sezvaunoda; Gungwa: Gomo, Mantis computing ... uye ivo vanokurudzira zvikuru windows 7 "kwechinguvana" kuiisa mumashopu avo. Panofanira kuva nechikonzero ??
jashoni hermes akadaro
NDINODA KUTAURA WINDOWS. NDAKAKOMBOKA MUMAYI. Kubva zvandakaiisa, ndine matambudziko chete. Ini ndinowana iyo bhuruu skrini, inoisa zvinhu pasina mvumo yangu, zvakare inononoka. A SHIT FUCK. Uye zvinoita sekunge hazvindibvumidze kuti ndidzorere kumahwindo angu ekare ... zvakandishungurudza kwazvo
Pindura kuna jashon hermes
Gustavo Rocano akadaro
windows 10 iri nyonganiso izere nezvikanganiso mazhinji emapurogiramu angu akamira kushanda uye
Yangu pc inotangazve pese pandinoivhura, ini ndaedza kumutsiridza yega yega, asi iyoyowo weada microsoft inoramba ichingoitika mushanduro yayo yemawindows 10, chitsotsi chehure …….
Pindura gustavo rocano
Microsoft mairi Windows 10 vhezheni ndeyekunyepedzera kubiridzira
Zvirongwa zvangu hazvishande kunyangwe ndichigadzirisa uye pc yangu inotangazve pese pandinenge ndichiedza kuvhura… .. ona kana mabhatiri atoiswa uye kugadzirisa matambudziko edu kana kutipawo nyore kwekuimisa uye kudzokera kune edu yapfuura vhezheni yemahwindo 8 inova yakavimbika uye inoshanda zvirinani kupfuura ichi crap….
Fatima perez akadaro
Sezvo ini ndakaisa windows 10 pakombuta yangu yedesktop, iyo internet inogara iri pakati, inouya ichienda sezvizvi ichienderera uye zvakadaro ini ndinoisa windows 8.1, ndiyo inounza pc yangu kubva kufekitori uye inoshanda kwazvo asi ini ndinoisazve windows 10 uye zvinokundikana zvakare, handizive zvekuita, ndakazvitora kuti ndizvigadzirise nekuti iri pasi pewarandi uye vanondiudza dambudziko rema windows 10 kuti havagone kuita chero chinhu
Pindura Fatima Perez
1 Sezvo Kwidziridzo isingapi mitambo iyi inononoka
2 Ini ndaifanira kuchinja kadhi rangu remukati repc yangu nekuti haripe vhidhiyo kadhi rangu
3 yangu skrini idiki kuti ndinoshandisa 40 uye 60 inch inch screen ndaifanira kutenga mini screen
4 windows 10 haina kukwana
5 inofanirwa kuwiriraniswa nevatyairi kubva kumawisos 8.1 kuenda kumawiros 10 madhiraivha ese aive ne1 asi izvi zvisina kukwana ini ndiri kushaya mutyairi pane dhiraivhi isiri kushanda
6 ikozvino handikwanisi kudzokera kumasystem angu ekare kusvika ikozvino ku windos 8.1 nekuti ini ndinowana kukanganisa kana ndichiedza kudzoka nekuti yaishanda pa100% uye yanga isinganonoke sezvazvino
7 kana chimwe chinhu chikavandudzwa ivo vanozoona kuti yangu pc iri sei uye i5 ine 16 yegondohwe uye inononoka kunonoka iyi shit ikozvino ini ndinotarisa ne ctrl alt sup uye gondohwe rangu rese rapedzwa izvozvi kana ndikaenda kune technician achabhadharisa ini $ 50 yakawandisa zvichienderana neNyika anogona here mumwe munhu kundiudza kuti ndodzokera sei kune yangu yekare system ndisina kuita chikanganiso kana ndichida kuwana $ 50 ini ndaizofanira kusevha yangu yegore rekuzorora yandisingakwanise kuita kana kutamba chero mitambo ikozvino ini ndinogona ndinofanira kutsungirira nekutamba nitento mitambo yekare pane yangu pc ini ndinongoda mumwe munhu kuti andiudze kuti ndodzokera sei ku Windos 1 nevese madhiraivha akamisikidzwa andaive ndisina kuwana kukanganisa pandinodzorera sezvakaratidzwa mu yotube uye ini ndikawana kukanganisa handikwanise kudzokera ku windos 8.1 kusvika zvino
Kuodzwa mwoyo neiyi inoshanda system.
Windows 10 inogadzira zvikamu zvenguva pfupi kwandiri, zvichikonzera kuti ndirasikirwe neruzivo rwese pakombuta yangu. Izvo zvaireva kurasikirwa neruzivo rwemabasa, kurasikirwa kwemari nekuti ini ndaifanirwa kuigadzirisa uye nekushanda nguva.
Chinhu chakanyanya kushatisa ndeyevashandi veMicrosoft, iwe unosheedza iyo nhamba uye mune imwe sarudzo yauinayo sevhisi kana zvirevo, saka unosarudza kufona rutsigiro rwehunyanzvi. Kana vakakuudza kuti havateereri izvozvo, unovakumbira kuti vakuendese kubasa rebasa uye vanokuudza kuti havagone… .ruregerero kuti kambani yakaita seMicrosoft haigoni kuzviita…. zvinonyadzisa.
Ini ndichafunga zvakaoma nezvekutenga zvigadzirwa kubva kwavari zvakare.
Kekutanga nguva pandakwidziridzwa kubva kuWindows 8.1 kuenda kuWindows 10, Windows 10 yakashanda senge shit. Ndine i5 4460, 12 Gb ye RAM uye yakasanganiswa Intel mifananidzo uye iyo OS yainonoka zvakanyanya, inorema, isina kujeka, yaizotonhora nguva zhinji uye ndaifanira kutangazve iyo pc kubva kubhatani bhatani, maitiro eSystem dzimwe nguva anodya iyo mod huwandu we7 Gb pasina kuita chero chinhu, bhuruu skrini ane akasiyana macode uye ndisingazive kuti dambudziko rakabva kupi, pese pandaisimuka kubva pc ndoisiya zvakadaro kweinenge maminetsi gumi neshanu, pandakadzoka, yaive yakavharika zvachose, izvo zvaive nei ndakafambisa mbeva uye ichifamba zvishoma, ini ndakatarisa maneja webasa uye iyo RAM yakadya 15%, handina kunzwisisa, nekuti pawakaisiya ichiri kudya 100% ye100 Gb ye RAM. Mazuva ano maUI kunyorera akashandisawo ese RAM muawa kana zvakadaro. Kekutanga zvakaitika kwandiri neGroove mumhanzi inoridza iyo yakadya 12 Gb ye RAM. Parizvino, iyo mufananidzo pane yekutarisa yakapenga uye ikasvetuka, svetuka bhuruu screen. Mushure mevhiki ndakadzokera kuWindows 10.7, iyo yaigara yakandinakira. Kudzokera ku 8.1, 8.1 bhuruu skrini. Saka, yanga isiri yangu hardware kukanganisa.
MunaNdira wegore rino, mukomana wangu akavandudza PC yake kuWindows 10, akandiudza kuti zvakamushandira zvirinani pane Windows 7. PC yake ndeye 2008, Core 2 Quad, 4 GB ye RAM uye GeForce 9500 GT . Ndakaenda kunoona uye zvechokwadi, muchina wake waive wakanyanya kuyerera uine gumi kupfuura na10. Ndakakurudzirwa kupa Windows 7 mumwe mukana, asi panguva ino, ndakaburitsa ISO kubva paMicrosoft webhusaiti ndokuiisa yakachena. Uye ini ndaishamisika zvinofadza kuti ikozvino dai ndaive ndakatarisana neAZ yakakura kukura, yainge isisachadya RAM yakawanda, maitiro ehurongwa anodyiwa nezvakawanda nezve 10 Mb ye RAM, Mazuva ano maUI mafomu anga atove kushanda sezvaaifanira, 50 bhuruu skrini , sisitimu yakanyorovera, kunyange hazvo Windows 0 ichiri kuita kunge yakanyorova. Muchidimbu, iyo yetsika haisi yekumhanya kuisa iyo ichangobva kuburitswa OS. Iwe unofanirwa kumirira inokwana mwedzi mitanhatu usati watama, uye rakanyanya kunaka igore rimwe kana panotanga Service Pack. Iyo Windows 8.1 Mbudzi dhizaini yakapukuta iyo OS zvakanyanya.
Ini pachangu ndinofunga kuti windows 7 (iyo system iyo pc yangu yakauya seyakajairwa) yakashanda zvirinani kupfuura windows 10 ... Ndakaivandudza ndichifunga kuti zvingave zvirinani ... asi payakavandudzwa zvakaratidzika kwandiri kunge zvaishanda zvakawanda netablet kana nharembozha iyo ine komputa…. nguva pfupi yapfuura vakatanga kugadzira mabugs, windows 7 zvirongwa zvakamira kushanda nekuda kwesarudzo dzakawanda dzekuenderana dzinogadziriswa otomatiki kana nekusarudza ivo. ipapo magadziriso ewindows 10 uye ini ndine matatu ekupedzisira mazuva mashoma apfuura iwo apfuura akapfuura mwedzi mumwe kubva kune mumwe ... pese painovandudzwa inononoka kana kugwamba kwemavhiki mashoma umo meseji inoonekwa zuva nezuva kana ese mazuva maviri MuCortana inoda kutangwazve kuti ishande ... mushure memavhiki akati wandei inoramba ichiita sepiritsi (padanho rekushandisa, asi rinoshanda) uye panguva imwechete rakandikumbira kuti ndiwedzere uye zvakafanana chinhu chakaitika ... KUNE MITAMBO INE NEMAWINDI 3 yakashanda uye Kwete nema windows 7, kuwedzera kune zvimwe zvirongwa zvinondipa zvikanganiso, kunyanya izvo zvinovandudza mashandiro senge tune up.
Pindura kune popopo
Iyo skrini inotaridzika inotyisa neWindows 10, iyo yakasviba mameseji, iwo akasiyana masayizi mune yega yega chirongwa, iwo akachinjwa mavara, neyese kuyedza kuigadzirisa iyo mamiriro anowedzera. Enda shit, chinonyanya kukosha pamusoro pekombuta ndechekuti chinotaridzika zvakanaka. Matera ekurangarira uye RAM uye haina kutaridzika zvakanaka. Shit Windows 10
Ndakaedza kugadzirisa makomputa akati wandei kubva kuWindow 7 uye Windows 8.1 uye hapana kana rimwe rawo ndakakwanisa kupedzisa kugadzirisa. Nei vakagadzira iyo yakapusa grey yepakati system kuti vasvike panzvimbo imwechete? Panzvimbo pekugadzira inoonekwa seyakashanda system, kana pakupera kwezuva kusimudzira mukushanda kushoma neWindows 7 kana 8.1.
Zviri pachena kwandiri, ini ndichaenderera mberi neWindows 8.1 kudzamara vasunungura chimwe chinhu chakakosha.
Pindura kuna Ivv0
Sinsemente windows 10 ndiyo yakashata iyo miccrosof yakaumbwa ini handinzwisise chero chinhu, kuti mapenzi aya angadzokera sei kumashure, ndinokurudzira kuti iwe usaise windows 10 haigone kwazvo saka ndinodzoka ndodzokororazve kumahwindo windows 10 fuck iwe microsof
Pindura kuna arianna
Chaizvoizvo ndinoda kutaura kuti iko kusvetuka uye kubvambura shiti ini ndakabira basa rekubira fizikisi uye kemesitiri neiyi fucking aberration inonzi Microsoft, saka kubva kwandiri bhiri masuo ndinokushuvira iwe kupaza kwekuparara pamwe chete nevanhu vese ava vakaputsika nechirongwa chako chekubata, kutsvoda
Madingindira uye mavara ndeekupenga, hapana nzira yekuziva kuti ndeipi hwindo iri pamusoro peimwe, hapana kupatsanurana pakati pemafuremu, zvinondisimbisa chaizvo, uye chinhu chakaipisisa ndechekuti sarudzo yekudzokera kumawindo 7 yanyangarika
marion lafihama akadaro
windows 10 yakaipa
Pindura marion lafihama
Alberto guevara akadaro
Zvakanaka, tarisa, ini ndiri mainjiniya ehurongwa uye ndine timu isingakundike mukugadzirisa kumhanya uye ndangariro dzepanyama, uye ndinogona kutaura neruzivo rwese kuti windows vaive uye vakanaka CHETE MUZVINHU ZVITSVA NEZVO ZVINOGONESESWA ZVINOGONESESWA NEMICROSOFT pese pavanoshanduka zita kubva windows 3.11 kusvika windows 10. zvese zvine zvidiki uye zvakakura zvikanganiso, ndosaka iwo ari maratidziro aunofanirwa kurodha pasi kugadzirisa.
Ini pachangu, chinondirova zvakanyanya ndechekuti ini handikwanise kushandisa windows kugadzirisa uye zvese zvirongwa zvinondibvunza nezvazvo, kuti iyo crappy browser haina kuenderana nenzvimbo dzehurumende nzvimbo uye kuti haizoregi iwe udzore mahanduro kana mahwindo kana bhurawuza, asi zvinopfuura Kundimanikidza KUTI NDINOGONESA MICROSOFT, KANA NDIKATENGA WINDOWS 7 YOKUTANGA, SEI ZVISIRI KUTI NDIPE RUTSIGIRO RWECHIMWE CHANDINOBHADHARA?
Ini ndinotsvaga mhinduro pamambure uye inonditumira kumaforamu eMicrosoft kwavanokuudza zvisina maturo nehafu uye hapana kana imwe chete inozvigadzirisa uye unogona kutarisa zvese zvichemo muforamu. uye chinhu chinonyanya kuodza moyo ndechekuti iwe unoda kutumira dambudziko rako kana chichemo chako uye hazvitenderi iwe kuti ukuendesere kune iwe otomatiki peji kwaunosiiwa usina mhinduro
Izvi ndezvekutengesa chete zvisinei nemutengi, mushandisi, kuitira kuti iwe utenge zvigadzirwa zvitsva.
Ini pachangu, kana mupi wemhando ipi neipi, akaedza kundinyengedza, anoratidza chinangwa chake chakaipa kune mutengi wake, uyo mune ino kesi asingapi mhosva kumupi (microsoft). zvinosuruvarisa iwe unofanirwa kuti uzviregere wega kune izvo zvekuti pese pavanoda ivo, unofanirwa kutenga komputa nyowani
Kwangu muWindows iri system yakanaka asi isina kugadzikana, nekuti kana ichinakidzwa haina kuteerera mirairo, zvirongwa, dzimwe nguva zvimwe zvinhu zvinoshanda nemazvo uye zvimwe kwete sezvazvinofanira uye chakaipisisa ndechekuti pese paunoshandura kunyangadza kwayo OS iwe unorasikirwa nekuenderana, iwe unofanirwa kutanga kudzidza kwako zvakare, uchingoona kuti iwo mamwe marutsi eSO
Nekuti ndeapi mamwe makwikwi aunogona kushandisa ayo asina hutsinye kune mumwe munhu anotengesa iwe chigadzirwa chavo uye ndokuzokutumira kugehena nezvose nezvigadzirwa zvavo.
akatsamwa chaizvo uye akatsamwa nekuti microsoft haina kupa mhinduro uye zvinoita sekuseka vashandisi vayo
zvishoma …… kwete?….
Pindura kuna Alberto Guevara
Kwandiri, chinhu chakanyanya surreal nezve W10 ndechekuti inogadziridza uye inotangazve pese painonzwa senge iwe usiri kukwanisa kuita chero chinhu kuidzivirira. Ndine makomputa manomwe ane w7, imwe iine w10 uye imwe iine XP. Yakanakisa, inokurumidza uye yakapusa, XP pasina kuzengurira uye iri I7.
Inoteverwa neW7, pane I5.
Iyo W10, yakaiswa pamakomputa manomwe ne7 mapurosesa, yakanyanya kuomarara nekuda kwayo, uye inononoka kupfuura XP. Ini ndaifanira kudzidzira pane zvinhu izvo zvandaimboziva kwazviri uye kuita zvinhu zvandaiziva kuita pakutanga. Kuparadza kunoshamisa kwenguva.
Kana ikatanga kutangazve (kusvika pa1 awa yakagadziridzwa), inokusiya usingakwanise kushanda kusvika yapera.
Ini ndabhadhara w10 kune imwe neimwe yeanomwe makomputa uye hapana nzira yekuti varegedze kutapudza bandwidth uye yangu nguva pane bullshit, senge yekuti inobatana nemamwe makomputa kana neMicrosoft yekugadzirisa kana zvakapusa ruzivo.
Iyo yakaoma, inorema, yakashongedzwa, uye inotorwa kure. Hapana chinoshanda uye chizere chekuzvarwa chisina basa. Senzira yekushanda yekushanda nayo, ndiyo yakaipa kupfuura mamwe windows, uye chero munhu anoti kwete, ndeyekuti haina kushanda chaizvo ne w10. Nekuti zvinotora musangano mumwe chete kukukanganisa iwe kuti uwane shitty gadziriso kuti ubvumirane neni. Nekuda kwaMwari, kushaya rubatsiro kwakadii ...
Hongu, ichokwadi chose. Ndine mabhuku maviri emabhuku ane Windows 2, imwe ine processor yekumhanyisa uye imwe iine I10, ese ari maviri anononoka zvakanyanya, uye yega yega yekuwedzera uye zvirongwa zvakawanda zvinomira kushanda. Ini ndinofarira mimhanzi chaizvo, ndaishandisa Windows Media Player zuva nezuva uye kubva pakuvandudzwa kwekupedzisira mutambi achindikandira chikanganiso mukuita kweseva pese pandinoda kuridza mimhanzi, handina imwe sarudzo kunze kwekuteerera mimhanzi neGroove nekuti Spotify Izvo zvinoita isingashande muWindows 7, pandinoyedza kuvhura, hazvitore chete asi bhuku rekunyora rinotonhora uye ndinofanira kuritangazve nechisimba, ndichirasikirwa nemaminitsi gumi kuti nditange futi. Ini ndaizoenda kuLinux, asi ndakanzwa kuti kune mapurogiramu andinoshandisa mazuva ese ayo muLinux anogona kunge asati aenderana saka ndinofanira kuzvibata nharembozha yangu kana piritsi uye ndinovimba kana bhuku rekunyora richida kushanda. Iyo yekushandisa system njodzi. Chakaipisisa pasirese
Zvakanaka, hongu, chokwadi ndechekuti ini handisi nyanzvi mune manejimendi manejimendi, asi ini ndiri kumusoro kwe… ye w10.
yakawanda shit uye kushanda kushoma, zvinoita sekunge zvakafanira kuve kune zvishuwo zve ino system….
Diego Hector akadaro
Ndine mhinduro !!! Isa Bill Gates mumotokari yaElon Musk uye umutumire kuSuva kuti adzokere zvakare.
Iyo nyowani compus haibvumidze kuhwina 7 nekuti inoshanda mushe, yakaipa, inokwana microchot
Pindura Diego Hector
Na w7 ini ndanga ndisina matambudziko ekugovana mafaera kana kubatanidza kunyorera pane network, uye ne w10 yakawanda haigone kubatana uye isingagovane mafaera, ini ndakaita akawanda ma tutorials uye ivo havana kana kubatanidza poindi-ku-poindi. Saka ini ndine mashoma mashandiro achienzaniswa new7 uye ini ndoda zvimwe zviwanikwa kuti ndiite chero yeiyo shit yandakaita new7. Uye ndisingareve kuti ini ndinofanira kudzima ese ma spy maficha avanazvo. Uchazviona, handina chivimbo chekuti inzira yakachengeteka. Ini ndinoramba ndichiishandisa chete kumitambo. Kuti havafambi muUbuntu. Pandinogona kuimisa uye kudzokera ku w7 Yakatsemuka. Kubhadhara w10 kwaive kukanganisa uye ini handisi kuzoisa imwe dhora pamahwindo. Ini handizive kuti nei Windows inotenga zvese uye ichiita kuti zviwedzere. Akazviita na skype, aine windows live, aine hotmail. Panzvimbo pekuvandudza shit.
Mhoro vanhu, ruzivo rwese kubva kuOneDrive rwakabiwa, Windows haishande uye hapana munhu anopa chero mhinduro. Icho chitsotsi, ini ndinowirirana iyo account yakavharirwa, kwaunogona kuita chichemo.
Ndiri kutsvaga zvakafanana. Kwokumhan'arira Microsoft
NDIRI PAMUSORO PEKUDZIMA IYO INOKUNDA 10 INODZIVIRIRA UYE USANDIITIRA KUTI NDIITE CHINHU.
NDINOTAURA PANO KUTI UWEDZE Bhora.
WINDOWS AND SECUACES ZVAMHANDIRA KUTI NDIENDE KUBVA KUZVINONOKA ASI CHETE XP KUNE IYI WIN 10 WED **, UYE CHINOSIYA NDIKO KUTI MAFORAMU ANOTI IYO 7, 8 DZAKATOVA ZVAKAIPA.
REDZIMWE RINODA KUTAURA ZVESE, KUZIVA ZVESE, KUSVIRA ZVESE ... .. ZVINOKOSHA KUTI VANOGARA NAYO, ASI VAKASARA HAVANETE KUSHANDA.
NDINOSHAMISWA, NDINOTENDA KU XP SENGE KUKARA
Kwakanakisa maonero ako Felix. Ini ndaishandisa Windows XP kwemakore mazhinji, ndikabva ndatenga kabhuku kane Windows 10 sezvo PC yaive neWindows XP yakatyora tarisisa. Kubva pandakatanga neWindows 10 handina kumira kuva nematambudziko ekuita uye zvirongwa zvakashanda muWindows XP muWindows 10 yakamira kushanda. Zvave zvichiratidzwa kuti Windows 10 ndiro dambudziko nekuti kana desktop yangu pc yakasvika pamakore matanhatu ekuberekwa neXP mune yakanakisa mamiriro uye yangu 6-gore-rekare bhuku rekuverenga handichakwanise kurishandisa nekuti rinotonhora kune zvese zvandiri kuda kuita. Ini handina computer nekuda kweWindows 1. Zvese zvandinoita ndinofanirwa kuzviita panharembozha yangu kana piritsi nekuti kubva mubhuku rekunyora hazvigoneke kana zvichikwanisika zvinonditorera maawa kuti ndiite zvandinoita nenharembozha yangu mumaminetsi maviri. Zvinotyisa Windows 10
Mangwana pakudya kwemasikati ndine macaroni nematomato.
ini handishandise linux distros akadaro
w7, iye chete mutsivi akakodzera XP kusvika nhasi, anochema ari callcenter wew10
Pindura kune ini handishandise linux distros
Zvinotaurwa nechinyorwa ichokwadi kwazvo. Zvese zvinoratidzwa nechinyorwa zvinoitika kwandiri. Uye ini ndinowana avo vanoti Windows 10 inoshanda mushe ndinoona isingafadzi. Kubva pazuva rekutanga randakaburitsa Windows 10, yaigara ichishanda zvisirizvo, zvikanganiso zvemarudzi ese uye zvinogara zvichingoitika. Semunhu anoshandisa, ndinobatana pamwe chete kunyunyuta pamwe uye ndinovimba Windows 10 inonyangarika kana kuti Microsoft yakatangwa uye tinotanga kushandisa Linux inodikanwa. Ndatenda nechinyorwa. Tsananguro yakanaka!
Shit chaiyo pamawindows 10
Murume akwegura haazomboshandisa PC sejaya (ruzhinji). Kana iwe uchizotamba kana chirongwa .. Usachipa yakawanda nguva, ZVINONYANYA.
Pindura kuna Markit0s
Zvakanaka chokwadi mawindows 10 kana kuti zvakanaka sekutaura kwavo
Kubva pane hukuru hukuru mabegi mazhinji ari kubuda ... zvirongwa zvakabviswa, zvimwe zvisingapindure, zvimwe zvinoramba zviri hafu uye nezvimwe ... uye chinhu chinonakidza iwe unofumura dambudziko kwauri, mumwe munhu asina zano rekubvunza anopindura zvese ine scannow uye chokwadi ndechekuti inogadzirisa zvishoma kana hapana chandakabvunza chiuru nguva nekuti ini handina chandinowana pakutanga kwebasa maneja uye havana zano
Zvinotaridzika kwandiri sekushaiwa ruzivo ndiani akanyora chinyorwa. Windows 10 yakapa matambudziko ??? Hapana munhu anonyunyuta nekuti ini handivandudze. Mhosva yacho ndeyekuparadza pc. Mune yangu nyaya bhuku uye pc. iwo andinomutsidzira kunze kwekusungirwa. Yakabvisa basa rangu rese ne backup yangu.
NDATENGESWA OUT NDINOGADZIRA MICROSOFT ACCOUNT NDAPEDZA KUWANA DATA NEMAIL. VAKATEVERA BUGUGI ZVANDAKAONA ZVISIRI ZVAKASIMBISWA. Bvisa DATA RANGU ROSE NDINODZIVA ZVESE.
Gore uchitaura zvakanaka uye hapana. Ini ndichaisa chichemo nekuti kwanga kwanyanya kukuvara.
Ndinoedza kuisa nekutenga Linux yakanaka. Ndinovimba vanondiraira. Ini ikozvino. Ini ndinongoda kushanda uye ndave ndakadai seizvi kwemwedzi. Ndatenda .
Pindura kuna Parker
Iye Justiciero akadaro
Windows 10 yanga iri fusion pakati pe7 uye hwindo 8, ivo vapa kumukira kune zvese kwaimbove pc yangu, ikozvino ndiyo komputa iyi, labyrinth yekuguma waziva kuti iwe zvirinani kugara mu7 kunze kwekumwe kuita. ndidzo dzavanosuwa, uye dzimwe dzinoshanda zvisirizvo, kunze kwekuve nekunzwa kwekutsoropodzwa nekudzorwa neMicrosoft, iyo inotikoka kuti timboedza mamwe masisitimu anoshanda senge zorin kana ubuntu semuenzaniso.Hazvisi zvese zvakashata mumawindo , iro rakanyanya kunaka chikamu nderekuti rinoshanda chaizvo pamakomputa ekare, mune yangu Lenovo IBM iyo yakatokwanisa kuisa madhiraivha andisina kuwana kunyangwe pane yepamutemo Lenovo webhusaiti
Pindura kune The Justiciero
simudzira Windows 7 kusvika ku10 uye iri crappy inoshanda sisitimu, inopfuura awa kuisa mutambo
Pindura kuna Abheri
Kunyanya pane zvese, nekuda kwenhamba hombe yematambudziko aive nemarara eWindows, ndakaenda kune iyo nyika yeLinux. Yekutanga yandakasangana nayo yaive Ubuntu 18.04, yaitaridzika kunge yakaoma kushandisa pakutanga, asi nekuda kwenharaunda yayo uye nemabhuku eUbuntu andakakwanisa kudzidza uye nhasi ndinoishandisa nemufaro. Kana ini ndichida kuve pirate uye kurodha pasi pirate Windows kutsigira kambani yakaipa seMicrosoft.
Ndiyo njodzi yakanyanya mhedzisiro, ndine HP komputa, ine huwandu hwakanaka hwe RAM, zvinoita sekunge hapana chinofadza iyi yekushandisa system crap. Yakagadzirwa zvisina kunaka (registry uye saizi yezvikamu) Kupambadzwa kwezviwanikwa, asi hongu, isu tiri sei isu tinopa mari yehupenyu hweiyi inotambudzwa Gates ... ndiani ane hanya? Chero.
Ini ndinoshandisa chaiwo muchina pandine makopi echinhu ichi uye Linux, pandinosimudza windows, muchina unofa. Kuva neaya maviri anomhanya padivi padivi, Linux inokunda nekure.
Chandisingachagoni kumira mushe kushungurudzwa kwandinoitwa nenhau dzandisina kukumbirwa. Kushungurudzwa kwacho kunondikonzeresa stress, kutyisa kune chimwe chehurwere hwangu. Ndakumbira rubatsiro, hapana anopindura chinhu. Sezvineiwo ndiri munhu achembera uye handizivi kuti ndovavharisa sei nekuti ndino ziva macomputer ekutanga. Ini ndinofanira kuchengetedza hutano hwangu, saka nekukurumidza pandichakwanisa ndichakumbira nyanzvi kuti ibvise INFAME Windows 10 uye ndidzosere kune yakaderera Windows yekombuta yangu yekare yandaifanira kuchinja nekuti pakanga pasina mhinduro. Ndinofunga vanotumira uye vanotsamwisa zvakanyanya nemapop ups avo zvekuti munhu anotenga chigadzirwa kubvisa pop ups. CUTE BUSINESS!!!! Microsoft Windows 10 uye kubuda kwayo kwakashata kupfuura hutachiona hwakaipisisa. KUNYANYA KUNYANYA.
Tuscan Nuria Diez akadaro
Bill Gates akatanga kutora mari kubva kuvashandisi paakafunga kusvibisa XP ne7.
Ini ndinonzwisisa kuti iwe unoda kuenderera mberi nekubiridzira nezvirongwa zvako zvisina basa senge gumi negumi nerimwe kuti uve mupfumi pasirese asi unofanirwa kuenda kujeri nekuda kwehutsotsi.
Pindura kuna Nuria díez toscana
Linux Mint 17.3 "Pink" yakabuda zviri pamutemo
Linux yaigona kukunda maWindows muvashandisi here?